Kevin de Bruyne Oo Go'aan Qalbi Jabiyey Pep Guardiola Ka Gaadhay Mustaqbalkiisa Iyo Kooxaha Uu Ka Farxiyey - Gool24.Net
Kevin de Bruyne Oo Go’aan Qalbi Jabiyey Pep Guardiola Ka Gaadhay Mustaqbalkiisa Iyo Kooxaha Uu Ka Farxiyey
Xiddiga Manchester City ee Kevin de Bruyne ayaa go’aan argagax geliyey Pep Guardiola ka gaadhay mustaqbalkiisa xilli kooxdaas uu saaran yahay ganaax laba sannadood lagaga mamnuucay tartamada Yurub sida Champions League iyo Europa League, kaddib markii lagu helay inay ku geftay sharciga dhaqaale wanaagga ee FFp.
Kevin de Bruyne ayaa noqday ciyaartoygii ugu horreeyey ee si cad go’aan uga gaadha Etihad, waxaanu doonayaa inuu iskaga baxo Man City marka uu furmo suuqa iibka ciyaartoyga ee bisha June, haddii ay kooxdaasi ku guul-darraysato inay in rafcaanka ay u qaadatay Maxkamadda CAS.
Kubbad-sameeyaha reer Belgium ayaa burin doona heshiis shan sannadood ah oo cusub oo uu dhowaan u saxeexay kooxdiisa, waxaanu rabaa inuu ka ciyaaro tartanka Champions League si uu ugu tartami karo abaal-marinta xiddiga dunida ugu wanaagsan sannadaha soo socda.
Sida ay qoreen labada wargeys ee Sport iyo Foot ee kasoo baxa waddanka Belguim, De Bruyne waxa uu go’aan rasmi ah ku gaadhay inuu ka dhaqaaqo Etihad Stadium laakiin hal shuruud ah ayaa uu bixitaankiisa ku xidhay,taas oo ah in kaliya uu tegi doono haddii ay maxkamadda CAS jawaab farxad leh siin weydo kooxdiisa.
Wakiilka Kevin de Bruyne ayaa waxa la sheegay in uu haddaba ku hawlan yahay sidii uu u dhegaysan lahaa dalabyada kooxo ay ka mid yihiin Real Madrid oo doonaya inay gacanta ku dhigaan kubbad-sameeyahan, waxaanu si cad ugu sheegay warbaahinta in sumcadda Kevin de Bruyne ay hoos u dhici doonto haddii uu ka maqnaado Champions League.
Dhinaca kale, Manchester City oo sugaysa inay jawaab ka hesho maxkamadda CAS ayaa waxa soo baxaya in siddeed kooxood oo Ingiriis ah oo ka ciyaara Premier League ay codsadeen in ganaax lagu rido kooxdan, isla markaana aan loo ogolaanin inay ka qayb-gasho tartanka Champions League labada xili ciyaareed ee soo socda.
Si kastaba ha ahaatee, Kevin de Bruyne ayaa sannadkiisii shanaad ku qaadanaya Manchester City oo sannadkii 2015 ay £68 milyan oo Gini kaga soo iibsatay Wolfsburg.